Doppler- Effect [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ > Doppler- Effect
View Full Version : Doppler- Effect
ကျွန်တော်တို့ radar technology မှာ Doppler- Effect ကို ပြသနာနှစ်ခုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးပါတယ်။အဲဒါတွေကတော့ အလျင် speed ကို တိုင်း တာခြင်း နဲ့ ရွေ့လျားနေတဲ့ပစ်မှတ်တည်နေရာကိုညွှန်ပြခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Doppler- Effect ဆိုတာကတော့ sound source က နားထောင်သူနဲ့တဖြည်းဖြည်း ဝေးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် နီးလာတဲ အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်(ဒါမှမဟုတ်) နားထောင်သူ က sound source နဲ့ တဖြည်းဖြည်းဝေး သွားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နီးလာတဲ့အချိန် မှာပဲဖြစ်ဖြစ် frequency ထဲမှာသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတဲ့ အပြောင်းအလဲ ကိုခေါ်ပါတယ်။ဒီနိယာမသဘောတရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ဂျာမနီသိပ္ပံပညာ ရှင် Christian Doppler ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်နားလည်လွယ်အောင် sound source လို့အလွယ်ပြောလိုက်ပေမယ့် တကယ်တမ်းကတော့ frequency ထုတ်ပေးတဲ့ ဘယ်လို source မျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတာပါ။ကဲ…အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ပြောင်းအလဲဆိုတာလေးကို နည်းနည်းပိုတိကျအောင်ပြောကြရအောင်။ဒါမှလည်း Doppler-Effect ဆိုတာကိုသေသေ ချာချာ နားလည်မှာပါ။ ဆိုကြပါစို့ရဲ့…..ကျွန်တော်တို့ခုဥပမာအနေနဲ့လေ့လာမဲ့ အသံလှိုင်း တစ်ခုရဲ့ frequency နဲ့ wavelength ဟာကိန်းသေတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုကြပါစို့။အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသံလှိုင်းကိုထုတ်မဲ့ source ကလည်းရွေ့လျားမနေဘူး ၊ဖမ်းမဲ့ receiver ကလည်း ရွေ့လျားမနေဘူးဆိုရင် receiver ကဖမ်းမိမယ့် frequency ဟာလည်းပြောင်းလဲမှူ ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် အသံ source ကနေထုတ်လိုက်တဲ့အတိုင်း တစ်မိနစ် မှာလှိုင်းအရေအတွက်ဘယ်လောက်ဆို ဘယ်လောက် receiver ကကွက်တိပြန် ဖမ်းမိလို့ပါ။ကဲလာပြီ…စရွေ့ကြမယ်….။အကယ်၍ အသံ source ကပဲဖြစ်ဖြစ် receiver ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခြားတစ်ခုရှိရာကိုရွေ့လျားလာမယ်ဆိုရင် receiver ကခုန နှစ်ခုလုံးရွေ့လျားမနေ တုန်းကမိတဲ့ frequency ထက်ပိုများတဲ့ frequency ကိုမိမှာပါ။ရှင်းပါတယ်။အသံနဲ့နီးရာကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ကသွားသွား အသံကပဲကျွန်တော်တို့နဲ့နီးရာကိုပဲလာလာ ကြားနေရတဲ့အသံ ပိုကျယ်လာမယ်မဟုတ်လား။ဒီသဘောပါပဲ။ပြောင်းပြန်အားဖြင့်ဝေးတဲ့ဘက်ကိုတစ်ခုခုကသွား မယ်ဆိုရင် receiver ကခုန နှစ်ခုလုံးရွေ့လျားမနေ တုန်းကမိတဲ့ frequency ထက်နည်းတဲ့ frequency ကိုမိမှာပါ။ဒါလည်းရှင်းပါတယ်။အသံနဲ့ဝေးရာကို ကျွန်တော်တို့ကသွားသွား အသံကပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးရာကိုသွားသွား ကြားနေရတဲ့အသံ တိုးသွားမယ်မဟုတ်လား။
ကဲဗျာ….ပိုရှင်းအောင် ဥပမာတစ်ခုထပ်ပေးကြရအောင်။ကားတစ်စီးမောင်းဖို့အတွက်စက်နှိုး ထားတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲဒီကားကကျွန်တော်တို့နဲ့ သုံးရာကီလိုမီတာအကွာလောက်မှာထားပါ တော့။ဒီကားကစက်သာနှိုးထားတာဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာတဲ့အထိမထက်ဘူးဆိုပါစို့။ ဒါဆိုအဲဒီဆယ့်ငါးမိနစ်လုံးကားစက်သံကို တသတ်မတ်တည်း ကျွန်တော်တို့ကြားနေရမယ် ဆိုတာ ဟုတ်တယ်နော်။အဲဒီနောက် ကားကကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့ဘက်ကိုမောင်းထွက် လာတယ်ဆိုရင် ကားကနီးလာလေလေ ကားစက်သံကိုကျွန်တော်တို့ပိုကြားရလေလေမဟုတ် ဘူးလား။အဲလိုပဲ ကားကကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကို မောင်းထွက်သွားတယ် ဆိုရင် ကားကဝေးသွားလေလေ ကားစက်သံကတိုးသွားလေလေမဟုတ်ဘူးလား။ဒီသဘော တရားကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် Doppler-Effect လို့ပြောနေတော့တာပါပဲဗျာ။ဒီလိုပြော လို့ အထင်တော့မသေးနဲ့ radar technology မှာသူမပါရင်ပွဲမစည်ဘူးဗျ။
V = speed of the wave_source
ဟုတ်ကဲ့ ကိုဟိန်းညီ။ ဥပမာလေး ပု စ္ဆာလေးတစ်ပုဒ်လောက်တွက်ပြရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ Application အတွက်ပေါ့။ Doppler ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ
ဆိုတာကိုပါ။ သီအိုရီကတော့ ရှင်းပါပြီခင်ဗျာ။
ကိုအံ့မင်းညိုက လုပ်ပြီ..အခုမှစတုန်းရှိပါသေးတယ်ဆိုမှ။ :P ပုစ္ဆာကအဝေးကြီးလိုသေးတာ။
ကျွန်တော်လည်းတွက်တတ်သေးဘူး ။ဟီးးးးးးးးးးး ;D
ကျနော်တို့ဒေါ်ပလာ ကြီး အကြောင်းပြောရင် ဒေါ်ပလာရှစ် ကြီး(Doppler Shift) အကြောင်းလည်း ပြောရမှာပေါ့။ :-[
Mobile Com မှာရောဘဲ သူမပါရင် ပွဲမစည်ပြန်ဘူးဗျ။ တော်တော် ဒုက္ခပေးတဲ့ အဒေါ်ကြီးဘဲ။
ပုစ္ဆာလေးလိုချင်သပဆိုရင်တော့ RFနဲ့ ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုတော့ ရှိတယ်။
အကယ်လို့ကားတစ်စီးက တစ်နာရီ ကိုလို၅၀ နှူန်းနဲ့မောင်းတယ်ထားပါဆို့။
Transmission Frequency က 800M Hz ရှိပြီး BSP(Baseband Signal Peroid) က 0.1s ရှိတယ်။အသံက ဖြေးဖြေးတိုးသွားမလား မြန်မြန်တိုးသွားမလားတဲ့။
(Will the receiver experience fast or slow fading?)
ကို ronaldishido အစ်ကို မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို အစ်ကိုဘဲတွက်ပြပါဗျာ။ ကျွန်တော်က တော့ တော်တော် စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ။
ီDoppler အကြောင်းကို သေသေချာချာရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက် ADF Automatic Direction Finder အကြောင်းသိရင်လဲသေသေချာချာ
Please,can you explain me about BTS in 3DCDMA.
Doppler- Effect နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြေးစည်တီးရင် နောင်ဝေေ၀ လို့ကြားရတာ မောင်းထုလိုက်ရင် ဒူဟူဟူ လို့ကြားရတာ နဲ့ အသံချဲ့စက်ကို ကားပေါ်တင်ဖွင့်ထားပြီး ပွဲကြော်ငြာကားမောင်းလာတာမျိုးတွေပဲ အတွေ့အကြုံရှိတယ်။
ရေဒါတွေ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်လဲ မသိပါဘူး။
အဲ.ကားက mach ၁ အရှိန်နှုန်းနဲ.သာသွားခဲ.မယ်ဆိုရင်ရော :? :? :?
ရမ်းပြောတာပါအဖြေက :P :P :P
signal processing ကို ကျွန်တော်မပိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကားက တစ်နာရီ ၅၀ နဲ့မောင်းနေတယ်။ ဖမ်းတဲ့ receiver နဲ့ 90 ဒီဂရီဖြစ်နေရင်တော့ doppler က သုညဖြစ်နေမှာ သေချာတယ်။ f(carrier)+- f(doppler)= F(reciever) မဟုတ်လားဗျာ။ ဒီလိုအလွယ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့မသိကိန်းက ဘာဖြစ်မလဲ။ receiver က မရွေ့တဲ့အနေအထား လား။ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ မေးခွန်းမပြည့်စုံဘူးထင်ပါတယ်။ f(carrier)=800MHz, BSP ကို frequency ကိုပြောင်းတော့ f(one cycle)=10 Hz .. ကဲဘယ်လိုဆက်တွက်မလဲ။
ဖြေးဖြေး၊ မြန်မြန်သိဖို့အတွက် reciver က ရွေ့ပေးမှပဲရတော့မယ်။ ကားက const: velocity နဲ့သွားနေတာဆိုတော့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ အင်း... ကျွန်တော်တော့ မဆက်စပ်နိုင်တော့ ဘူးဗျ။
signal receiver unit တစ်ခု၇ှိမယ်ဗျာ
နောက်တော. signal transmitter ကိုတော.ကားမှာတပ်ထားမယ်
အဲ signal receiver unit မှာတော. distance range တစ်ခုသတ်မှတ်ပေး၇မယ်ထင်ပါတယ်
ဘာလို.လဲဆိုတော. ရေဒါတိုင်းမှာ distance range သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်
အဲ. သဘောဆိုရင်တော. ၉၀ံဖြစ်နေလဲသတ်မှတ်ချက် တစ်ခုအတွင်းမှာ
အရာဝတ္ထု တစ်ခု၇ဲ.သွားနှုန်းကို period ဘယ်လောက်ဆိုတာပြလာရင်
အဲပြောနေရင်းကနေအသံသွားနှုန်းအလျင်ပြောတာကနေရေဒါပိုင်းကိုရောက်သွားပြီ :e :e :e :e :e :e :e :O :O :O
ကိုနတ္ထိ.. တော်တော်ကြီးလွဲသွားပြီထင်တယ်နော်။ transmitter ကိုကားမှာတတ်မှတော့ သူ့ကိုလိုက်ဖမ်းနေပါတော့မလား။ အကိုစဉ်းစားတာက ရေဒီယိုအသံလှိုင်းလွှင့်သလိုဖြစ်နေပြီဗျ။
ကားပေါ်ကနေလွှင့်ပေးမယ်။ နားထောင်ချင်ရင်သူလွှင့်တဲ့ channel မှာလိုက်ဖမ်းဆိုသလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ကားပေါ်မှာ transmitter တင်ထားမှတော့ အဲဒါဟာ ရေဒါရဲ့ သဘော မဟုတ်တော့ဘူးလေဗျာ။ RADAR= radio detection and ranging လွှင့်မယ်၊ လွှင့်ပြီးပြန်လာတဲ့ signal ကိုဖမ်းမယ်။&lt;&lt;နောက်တစ်ချက်က ၉၀ံ ဖြစ်နေလည်း သူ့သွားနှုန်းပေါ် မူတည်ပြီးဘယ်လိုလဲဆိုတာ တွက်လို့ရမှာပါ။&gt;&gt;receiver နဲ့ target နဲ့ 90degree ဖြစ်နေရင် doppler မရှိဘူးဗျ။ မယုံရင် ဒီလိုစမ်းကြည့်ပါလား။ အကို့ရဲ့ညာဖက်မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို 90 degreeထားပြီး လမ်းလျောက်ခိုင်း။ သူလမ်းလျောက်သံကိုအကိုကြားရမယ်။ သူနဲ့အကို့ညာဖက်နား 90 degree ရှိနေသမျှ အသံမပြောင်းဘူး။ (ချွင်းချက် ခလုတ်တိုက်မိလို့ Freq မြင့်သွားတာမပါ) :D။ ဒါပေမယ့် အကိုနဲ့ degree ပြောင်းသွားရင်တော့ တိုးရင်တိုးသွားမယ်၊ ကျယ်ရင် ကျယ်လာမယ်။ ဒါဆို doppler effect ၀င်လာပြီ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာ။ receiver က အသေလား၊ အရှင်လားလို့။ ပြောရင်း ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီတုန်း။ မေးခွန်းမေးတဲ့သူက ဘယ် field ကနေ မေးသွားတာတုန်း လာဖြေပါဦး။ နောက်ပြီး အဲဒီသွားနေတဲ့ကား periodic ဖြစ်တယ်လို့ပြောမထားဘူးဗျ။ အဲဒီအတွက် ဒီကားဟာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားနေတာလဲ။ step function လား၊ linear function လား၊ အင်း... ဒီပုစ္ဆာက အဲဒါတွေစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးထင်တယ်ဗျ။ရေဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုနတ္ထိစဉ်းစားသလိုလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ Moblie com လို့လည်းပြောထားတာ။ တော်ပြီဗျာ၊ ခေါင်းပူလာပြီ။ :D ကိုနတ္ထိ ကျွန်တော်လည်းထင်ရာပြောနေ တာနော်။ စိတ်မဆိုးရဘူး။ အဟီး :)